Guddoomiyihii gobolka Sool ee maamulka Somaliland & saddex qof oo kale oo ku dhaawacmay qarax lala beegsaday. – Radio Daljir
Guddoomiyihii gobolka Sool ee maamulka Somaliland & saddex qof oo kale oo ku dhaawacmay qarax lala beegsaday.
Lascanod, Jan 28 ? Guddoomiyaha gobolka Sool ee maamulka Somaliland Faarax Askar Xuseen ayaa si xooggan ugu dhaawacmay qarax miino oo ah nooca ramuudka laga maamulo ah, kaasi oo lagu qarxiyey gaari uu saarnaa isaga iyo qaar ka mid ah illaaladiisu.
Qaraxaan oo ahaa mid aad u xooggan ayaa lagu aaskay kadinka hore ee guriga guddoomiyuhu uu ka degganaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, waxaana la qarxiyey kadib markii gaara guddoomiyuhu uu soo is taagay ilinka guriga.
Mid ka mid ah illaada guddoomiyaha ayaa qaraxaasi ku dhintay, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 3 qof oo kale oo labo ka mid ah ay ahaayeen dad shacab ah oo marayey meel ku dhaw goobta qaraxu uu ka dhacay.
Guddoomiyaha oo dhaawaciisu uu yahay mid aad u xooggan ayaa loola cararay cisbitaalka magaalada Laascaanood, waxaana dhakhaatiirka caafimaadka ee cisbitaalkaasi ay sheegeen xaaladdu guddoomiyuhu in ay tahay mid liidata.
Ugu yaraan 4 meelood oo kala duwan ayaa guddoomiyaha dhaawacyo ka soo gaareen oo uu ku jiro madaxa oo illaa labo meelood uu dhaawacmay, waxaana sidoo kale la tilmaamayaa 3-da qof ee kale ee qaraxa ku dhaawacantay iyana in ay qabaan dhaawacyo xooggaan, kuwaasi oo haatan lagu dabiibayo cisbitaalka guud ee magaaladaasi Laacaanood.
Muddooyinkii ugu danbeeyey qaraxyada noocaan oo kale ah ayaa si is daba-joog ah uga dhacayey Laascaanood, kuwaasi oo lala bartilmaameedsanayey madaxda maamulka Somaliland ee ka hawlgasha Laacaanood.